Akhriso:Maqaamka la Gaarsiyay Salliga Nabiga(NNKH) | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Akhriso:Maqaamka la Gaarsiyay Salliga Nabiga(NNKH)
Maanta waa maalin khamiis ah waxa ay ku beegantahay markii Nabigeena Maxamed uu ifka aduunyo ku soo biiray .
Waa Markii uu dhashay waa markii nuurkiisa laga dareemay dunida oo idil Habeenkaas dhamaan malaa’igta dhan waa ku salliyeen duunyada kale ee dunida jogtaa waa ku Salliyeen.
Hadaba waxaa idin soo gudbineynaa Xadiis laga Wariyay Nabiga kasoo ka hadlayo maqaamka la gaarsiyay Salliga Nabiga NNKH.
Maalin ayaa Saxaabi Nabigeena (SCW) u yimid wuxuuna ku yiri Ducadeyda markii AFAR loo dhigo meel ka mid ah waxaan ka dhigaa Saligaaga, Nabiga ayaa ugu jawaabay waa kheyr waxaase kuu sii kheyr badan inaad ka badiso.
Saxaabigii ayaa markale ku yiri Nabigeena Ducadeyda markii SADDEX loo qeybiyo qeyb dhan waxaan ka dhigayaa inaan adiga kugu saliyo, Xabiibkeena ayaa ugu jawaabay waa kheyr waxaase kuu sii kheyr badan inaad ka badiso. Saxaabigii ayaa misane yiri Ducadeyda markii SADDEX loo dhigo labo ka mid ah waxaan ka dhigayaa Saligaaga oo qeybta hartayna anigaa ilaahey baahideyda ugu sheeganayo, Rasuulka ayaa ugu jawaabay waa kheyr waxaase kuu sii kheyr badan inaad ka badiso.
Saxaabigii ayaa yiri hadey sidaa tahay Ducadeyda oo idil waxaan ka dhigayaa Saligaaga, Xabiibkeena ayaa ugu jawaabay adna Hamigaaga adduun iyo kaaga aakhiraba waad helaysaa oo waa lagu siinayaa waana laguu dambi dhaafay.
Alle ha inga dhigo kuwa raaca tariiqda Nabiga.
Maqaal horeGudoomiye Mursal oo farriin u diray xukuumadda cusub
Maqaal XigaR/Wasaare Rooble oo Hambalyo u diray ummadda Muslimka